လူထှု လှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွပါ၀င် နေရုံသာမက အမှိုက်တွေကိုပါ စနစ်တကျ နဲ့ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပေးနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့် – Let Pan Daily
လူထှု လှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်တက်ကြွကြွပါ၀င် နေရုံသာမက အမှိုက်တွေကိုပါ စနစ်တကျ နဲ့ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပေးနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်
လတ်တလောမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အစွမ်းကုန်ပါ၀င်လှုပ်ရှားနေကြကာ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့လုပ်ဆောင်နေကြတာကို အားလုံးလည်းသိမြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်…..။ အခုလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေအတွင်းမှာ အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့လည်း ပြည်သူထဲကပြည်သူတွေပဲ ဖြစ်တာမလို့ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ပရိသတ်တွေ နဲ့ တစ်သားတည်းရပ်တည်ကာ လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုလှုပ်ရှားမှုတွေကို တက်ကြွစွာပါဝင်နေတဲ့ လူငယ်အနုပညာရှင်တွေထဲမှာဆိုရင် အုပ်စိုးခန့် တစ်ယောက်လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အုပ်စိုးခန့်ဟာ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတက်ကြွစွာပါ၀င်နေတာလည်းဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် မုန့်တွေလှူဒါန်းခဲ့ရုံသာမက အမှိုက်တွေအထိပါ စနစ်တကျနဲ့ ပြန်လည်သိမ်းပေးနေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်…..။
အုပ်စိုးခန့်ဟာ အခုလိုတက်ကြွစွာပါ၀င်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို Facebook စာမျက်နှာမှာ “Free our Leaders ! We want democracy ! We need justice……” ဆိုပြီးရေးသားကာ မျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ်တည်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်ရဲ့ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
လတ္တေလာျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန အစြမ္းကုန္ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနၾကကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာကို အားလုံးလည္းသိျမင္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္…..။ အခုလိုျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနအတြင္းမွာ အႏုပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ျပည္သူထဲကျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္တာမလို႔ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ပရိသတ္ေတြ နဲ႔ တစ္သားတည္းရပ္တည္ကာ လႈပ္ရွားမႈေတြျပဳလုပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
အခုလိုလႈပ္ရွားမႈေတြကို တက္ႂကြစြာပါဝင္ေနတဲ့ လူငယ္အႏုပညာရွင္ေတြထဲမွာဆိုရင္ အုပ္စိုးခန႔္ တစ္ေယာက္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ အုပ္စိုးခန႔္ဟာ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကိုတက္ႂကြစြာပါ၀င္ေနတာလည္းျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြအတြက္ မုန႔္ေတြလႉဒါန္းခဲ့႐ုံသာမက အမႈိက္ေတြအထိပါ စနစ္တက်နဲ႔ ျပန္လည္သိမ္းေပးေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္…..။
အုပ္စိုးခန႔္ဟာ အခုလိုတက္ႂကြစြာပါ၀င္လႈပ္ရွားေနတဲ့သူ႔ရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြကို Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ “Free our Leaders ! We want democracy ! We need justice……” ဆိုၿပီးေရးသားကာ မွ်ေဝလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုမ်ိဳး လူငယ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ္တည္လႈပ္ရွားေနတဲ့ အုပ္စိုးခန႔္ရဲ႕ပုံေလးေတြကို ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ရေကူးကန်ထဲ မှာ ဖုန်းပြောနေတဲ့ အကြမ်းစား မိမိုက်နေတဲ့ ပုံလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ သဘောကျနေကြတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်